သူမရဲ့ခဈြသူကောငျလေးနဲ့လှနျလပျပေါ့ပါးစှာလြှောကျလညျနရေတဲ့အတှကျ အတိုငျးမသိပြျောရှငျနတေဲ့ သူဌေးကွီးဦးတဇေရဲ့သမီးရခေယျြတဇေ – Shwe Yaung News
ပရိသတျကွီးရေ မွနျမာနိုငျငံတှငျ အခမျြးသာဆုံး စာရငျးဝငျသူမြားထဲတှငျ ဦးတဇေတဈဦးလညျး အပါအဝငျပါပဲနျော။ ဦးတဇေဟာ သဈတောမြား ပွုနျးတီးတဲ့အထိ ခုတျထှငျပွီး တိုငျးပွညျရဲ့သယံဇာတမြားကို ရောငျးခပြွီး အခမျြးသာဆုံးစာရငျးဝငျခဲ့ ပါတယျနျော။
မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး သူတို့ပိုငျဆိုငျမှုတှကေ မနညျးမနောပါပဲနျော။ မွနျမာနိုငျငံမှာ ရောဂါတှထေူပွောနပွေီး အရေးအခငျးတှေ ဖွဈနတောကွောငျ့ သူ့ရဲ့ သမီးအငယျဆုံး ရခေယျြတဇေကို ပွညျပနိုငျငံမှာပဲ အခွကြေ နထေိုငျစခေဲ့ပါတယျနျော။
ရခေယျြတဇေဟာလညျး အာဏာသိမျးခံရစဉျက သူ့ရဲ့ ဆိုရှယျမီဒီယာမြားတှငျ ဘာတဈခုမှ မတငျခဲ့ပါဘူးနျော။အခုလညျး သူ့ရဲ့ခဈြသူနဲ့အတူ အီတလီမွို့က လမျးမထကျမှာ အပြျောကွီး ပြျောနကွေတဲ့ ပုံရိပျတှေ ခပြွလာပွနျပါပွီနျော။
နိုငျငံရေးမကောငျးတဲ့ အခြိနျတှငျ ပွညျပမှာ သာယာနတေဲ့ ရခေယျြကို comment ရေးပွီး ပွောသှားကွပါဦး ပရိသတျကွီးရေ….
သူမရဲ့ချစ်သူကောင်လေးနဲ့လွန်လပ်ပေါ့ပါးစွာလျှောက်လည်နေရတဲ့အတွက် အတိုင်းမသိပျော်ရွှင်နေတဲ့ သူဌေးကြီးဦးတေဇရဲ့သမီးရေချယ်တေဇ
ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင်သူများထဲတွင် ဦးတေဇတစ်ဦးလည်း အပါအဝင်ပါပဲနော်။ ဦးတေဇဟာ သစ်တောများ ပြုန်းတီးတဲ့အထိ ခုတ်ထွင်ပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့သယံဇာတများကို ရောင်းချပြီး အချမ်းသာဆုံးစာရင်းဝင်ခဲ့ ပါတယ်နော်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေက မနည်းမနောပါပဲနော်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရောဂါတွေထူပြောနေပြီး အရေးအခင်းတွေ ဖြစ်နေတာကြောင့် သူ့ရဲ့ သမီးအငယ်ဆုံး ရေချယ်တေဇကို ပြည်ပနိုင်ငံမှာပဲ အခြေကျ နေထိုင်စေခဲ့ပါတယ်နော်။
ရေချယ်တေဇဟာလည်း အာဏာသိမ်းခံရစဉ်က သူ့ရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင် ဘာတစ်ခုမှ မတင်ခဲ့ပါဘူးနော်။အခုလည်း သူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူ အီတလီမြို့က လမ်းမထက်မှာ အပျော်ကြီး ပျော်နေကြတဲ့ ပုံရိပ်တွေ ချပြလာပြန်ပါပြီနော်။
နိုင်ငံရေးမကောင်းတဲ့ အချိန်တွင် ပြည်ပမှာ သာယာနေတဲ့ ရေချယ်ကို comment ရေးပြီး ပြောသွားကြပါဦး ပရိသတ်ကြီးရေ….
ဆုံးပါးသှားတဲ့ ဖှေးဖှေးရဲ့ဖခငျကွီးအားရညျစူးပွီး ပုဂံက မိဘမဲ့ကြောငျးမှာ နဆှေ့မျးကပျလှူပေးလိုကျတဲ့ ဝတျမှုနျရှရေညျ